कहिलेसम्म आन्दोलन ?
By administrator on	 December 15, 2020 देश, सम्पादकीय, स्थानीय
वर्षभरि मेहनत गरेर हुर्काएको उखु अब बेचुला र आएको पैसाले सो उखु लगाउन लागेका खर्च तिरुला भनेर साचेका किसानलाई आन्दोलनमा होमीनु परेको छ । बर्सेनी आफ्नै बालीको पैसा उठाउन सरकार गुहार्नु पर्ने बाध्यता छ । जब किसान आन्दोलनमा होमिन्छन् तबमात्र उनिहरुले आफुले बेचेको बालीको मुल्य पाउँछन् । वर्षेनी उनिहरुले सरकारसमक्ष हार गुहार गर्नु परिरहेको छ । सरकारले उखु किसानको समस्यामा खासै ध्यान नदिने गरेको किसानको गुनासो छ । उखुको मुल्य नपाउने समस्या त छदैं छ त्यसमाथी किनेको उखुको पैसा पनि अर्को साल दिउँला भन्दै साँचेर राख्ने र त्यो पनि नदिने उखु मिलहरुको दादागिरीले किसान हैरानी व्यहोर्न बाध्य छन् । मिलको यस्तै रवैयाका कारण कति किसान त यस व्यवसायबाट पलायन समेत भएका छन् । यस वर्ष पनि तराईका विभिन्न जिल्लाका किसानहरू उखु मिलबाट पाउनु पर्ने पैसा दिलाइदिन सरकार गुहार्दै काठमाडौं सम्म पुगेका छन् । उखु किसानका अनुसार उनीहरूको ९० करोड रुपियाँ बक्यौता भइसकेको छ ।
गत वर्ष पनि उखु किसानहरूले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनको संयोजन गर्दैआएको उखु किसान संघर्ष समितिले यसपटक किसानहरूले अब बक्यौता उठाएरमात्र घर फर्कने अठोट गरेको बताएको छ । उखु किसान र चिनी कारखानाको व्यवस्थापन एकअर्कामा निर्भर छन् । किसानले उखु बाली लगाउनै छाडे भने चिनी कारखाना स्वतः बन्द हुनेछन् । यस्तै, चिनी कारखाना बन्द भए किसानहरूको उखु पनि बिक्नेछैन । यसैले अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका किसान र कारखाना प्रबन्धकहरूले अब बरु आपसमा बसेर समस्या सल्टाउने प्रयास गर्नु उचित हुनेछ ।
तीन तहका सरकार रहेपनि सरकारको महशुस गर्न नपाएको उखु किसानको भनाई छ । उखु मिलका सञ्चालक वा सरकारी अधिकारीहरूले समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको भए यति गम्भीर अवस्था नहुने उनिहरुको तर्क छ । चिनी कारखानाका व्यवस्थापकहरूले पनि आफूहरू समस्यामा परेकोे गुनासो गर्दैआएका छन् । विशेषगरी तस्करीको चिनीका कारण आफ्नो उत्पादन विक्री नभएकाले किसानको पैसा समयैमा तिर्न नसकेको उनीहरूले भनेका छन् । यस्तो आन्दोलन कहिलेसम्म गरिरहनु पर्ने हो ? यस्तोमा सरकारले दुवै पक्षको मर्का सुनेर चिनी कारखाना बन्द पनि नहुने किसानको पैसा पनि नडुब्ने गरी बेलैमा समस्या समाधान पहल गर्नुपर्छ । गतवर्ष सम्झौता गरेर पनि सम्झौता अनुरुप कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना हो । सरकारले दोषि पत्ता लगाई कारवाहिको दायरामा ल्याए यस्ता गतिविधिले निरन्तरता पाउने थिएनन् ।